Anatomy-ka Jabinta 2020, Iyo Noocyada Sameeyay | Martech Zone
Talaado, Agoosto 11, 2020 Talaado, Agoosto 11, 2020 Michael Della Penna
COVID-19 wuxuu aasaas ahaan u beddelay adduunka suuqgeynta. Iyadoo lagu guda jiro xayiraadaha kala fogeynta bulshada, xeerarka xilliyeed ee dabeecadaha macaamiisha ayaa dib loo dhisay isla markiiba. Natiijo ahaan, in ka badan saddex meelood laba meel sumadaha hoos u dhigida dakhliga.
Hase yeeshe, xitaa inta lagu guda jiro carqaladeynta heerka caadiga ah, celcelis ahaan Mareykanku wali wuxuu la kulmay illaa 10,000 xayeysiis maalin kasta, halka noocyo badan ay ka soo baxeen wax bixintoodii agagaarka cusub ee caadiga ah oo wuxuu eegay inuu ilaaliyo Share of Voice oo lamid ah Share of Market. Xaqiiqdii, waxaan rumeysanahay haddii aan dib u milicsanno waqtigan mustaqbalka fog, waxaan la yaabi doonnaa hal-abuurnimada iyo xariifnimada sumcado badan oo hoggaamiyeyaal suuq ah si loola qabsado oo loola xiriiro baahida macaamiisha. COVID-19 waxay si firfircoon uga hawlgashey bey'addan cakiran ee aan la hubin xitaa muhiimad gaar ah ayey u leedahay sumadaha, kuwaas oo dareemayey cadaadis ba'an oo ay ku garaacayaan kootada. Meel gaar ah oo muhiimad gaar ah leh ayaa waxay tahay inay awood u leeyihiin inay ku jaraan sawaxanka farriin awood leh, bartilmaameed ah, iyo fariimo ku habboon.
Iyada oo dad badan oo Mareykan ah ay iskood uga go'doomaan guryahooda iyo taraafikada cagta ee Main Street ayaa la joojiyay, danaha macaamiisha ayaa la beddelay. Baahida adeegyada qulqulka, qalabka jimicsiga, gaarsiinta cuntada, iyo iibsashada aalkolada ayaa si dhakhso leh kor ugu kacay maaddaama Mareykanku ay u muuqdeen inay ku habboon yihiin oo ay ku madadaalinayaan iyagoo ku raaxeysanaya cunnooyinka makhaayadaha maxalliga ah ee ay jecel yihiin Xayeysiiyeyaasha, ku guuleysiga inta lagu gudajiray "caadadan cusub" dabeecadda micnaheedu waa bedelida yoolalka, yoolalka, iyo xeeladaha si loola kulmo macaamiisha halka ay joogaan uguna keenaan qiimaha shuruudahooda.
Sannad kasta, InMarket cadeeyaa ololeyaal taagan oo ka tarjumaya isku-darka farshaxanka iyo sayniska si looga gudbo buuqa loona abuuro daqiiqado sumcad saameyn leh. Ku guuleystayaasheena qeybta koowaad ee 2020 waxay u taagan yihiin xitaa inbadan sababtoo ah duruufaha aan caadiga aheyn ee aan hadda wajaheyno. Guusha ay ka gaareen dhinacyo badan waxay la mid noqon karaan awooddooda ay ku qabsan karaan xilligan oo ay isugu dari karaan waqtiga, ku habboonaanta, iyo macnaha guud si ay u kiciyaan daqiiqado iyo waaya-aragnimo u gaar ah.
Xaalad kasta, astaamaha la iftiimiyay ee kuxiran macaamiisha heer qoto dheer, ha ahaato rabitaan ah inaad banaanka ka baxdo oo aad aqbasho dhinacyadooda DIY ama adoo siinaya qiimo inta lagu jiro waqtiyada dhaqaalaha ee aan la hubin. Tusaale ahaan, noocyada sida Jameson iyo Contadina, ayaa lagu muujiyey Daqiiqado kooban, waxay dhalisay xoogaa nostalgia iyo raaxo leh oo na xasuusinaysa waqtiyadii fudud, ee farxada badnaa.
Ugu dambeyntiina, ololahan guuleysta ayaa ah mid si weyn uga tarjumaya duruuftayada iyo tan cusub ee caadiga ah, taasoo dhalisay aragti gaar ah iyo Heerarka Taabashada - (CTR) - sida sare 18.1% - in ka badan 30 jeer ka sarreysa heerarka warshadaha.
Guud ahaan noocyada doonaya inay isku xirmaan oo ay macaamiisha ka qaybgeliyaan sida ugu wanaagsan ee ay maskaxda ku hayaan waxyaabaha soo socda:
Gaarsiinta & Waqtiga
Suuqgeynta ku saleysan goobta waxay xoojineysaa waqtiga loogu talagalay xayeysiistayaasha wax walba. Ololayaasha xayeysiiska ee lahaa daqiiqado wax ku ool ah dhammaantood waxay leeyihiin wax wadaaga: waxay la macaamilaan macaamiisha saxda ah waqtiga saxda ah iyo kanaalada saxda ah oo ay ku jiraan khadka tooska ah iyo dukaanka - markay ku jireen nidaamka iibsiga.
Kaqeybgal Hal abuur
Ubucda olole kasta oo waxqabad sare leh waa farriin iyo hal-abuur weyn. Xaalad kasta oo ay yihiin wax-soo-saareyaasha wax-qabad ee wax-ku-oolka ah ayaa lagu soo rogay isbeddellada muhiimka ah ee makro waxayna si uun u ahaayeen kuwo nostalgic xiriir adag la leh dhaqanka - sida Jameson's Maalinta St. Patrick Keen Baarka Guriga.
Daqiiqad kasta waxay ku guuleysatay inay macaamiisha ku qabsato muuqaallo adag oo ay ku jiraan animation, is-dhexgal oo ay la socdaan nuqul awood badan.
Macluumaad & Bixin
Dhamaadka maalinta, dalabyada iyo arrimaha ku saabsan waxay noqon karaan qiimo dhimis, abaalmarin ama macluumaadka badeecada oo ay ku jiraan faa'iidooyinka wax soo saarka. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay runna u tahay inta ay jirto hubin la'aanta dhaqaale ee jirta. Daqiiqadaha ugu sarreeya ee qeybtii hore ee sanadka oo la isku daray ictiraaf sumadeed iyo farriin qiimo ku saleysan oo ka bilaabmaysa The Fresh Market Casho Done cuntooyinka, laga bilaabo $ 3.75 qofkiiba, illaa Contadina'Kuuboonada dijitaalka ah ee iibsashada badan.
In kasta oo 2020 dhab ahaantii tahay waqti aan horay loo arag taariikhdeena, saameynta dhacdooyinka ku hareeraysan COVID-19 waxay gacan ka geysatay kicinta iyo laga yaabee inay sare u qaaddo waxqabadka guuleystayaasheena Momak. Si kastaba ha noqotee, iyadoon loo eegin duruufaha dibedda, magacyada runta u taagan inay u hor mariyaan baahida macaamiisha, gaarsiinta heerka sare iyo waqtiga ay u dirayaan farriimaha ku saabsan baahiyahaas - gaar ahaan waqtiga dhabta ah iyo inta lagu guda jiro howsha iibsiga iyo dhisidda hal-abuurnimo leh farriin qiimo leh naftooda ayaa ku guuleysan doona jabinta iyada oo loo marayo.
Degso InMarket Breakthrough Moments 2020
Tags: reer miyiCOVID-19hal abuur lehctrsuuqaWaqtiyada InMarket BreakthroughInMarket Breakthrough Moments 2020jamesonsaamiga suuqasaami qaybsiga
Michael Della Penna waa Sarkaalka Madaxa Istaraatiijiyada ee InMarket. Michael wuxuu in ka badan 25 sano oo khibrad ah uga shaqeynayay xogta, xayeysiinta dhijitaalka ah, iyo warshadaha suuqgeynta. Michael waxaa loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah Majaladaha B-to-B "100-ka Qof ee ugu Saamaynta Badan Ganacsiga-iyo-Ganacsiga iyo Suuq-geynta Is-dhexgalka" shan jeer oo ka mid ah tabarucaadkiisa socda ee lagu dhisayo hababka ugu wanaagsan ee suuqgeynta dijitaalka ah.